Maalinta: Febraayo 11, 2018
Safarrada Wadooyinka ee Baasifoorka laga joojiyay magaalada Bursa
Iyadoo la siinayo gaadiid kale oo udhaxeeya Bursa iyo Uludağ, gaariga fiilada ayaa joojiyey duulimaadyadeedii sababo cimilada xun awgeed. Baabuurka fiilada ee rakaabka u raraya Uludağ, halkaas oo gawaarida rakaabka ee 20 ay wadaan hal 8 ilbiriqsi, ma awoodi doonaan inay maanta adeegaan. Bursa [More ...]
Smart City Denizli: Degmada Denizli waxay siisaa adeegyo fara badan muwaadiniinta si dhakhso leh oo fudud iyadoo la cusbooneysiinayo dalabkooda mobilada. Aaway codsigayga baska ee loogu talagalay farmasiyada shaqada, Denizli Kayak cinwaanka macluumaadka cinwaanka [More ...]
Nidaamka Gaadiidka Dadweynaha Altinordu wuxuu bilaabmaa Habeen Cusub
Iyadoo Mashruuca Isbeddelka Casriga ah ee Gaadiidka Dadweynaha laga hirgaliyay degmada Altınordu, muddo gaadiid dadweyne ayaa la xiray. Laga bilaabo Isniinta ilaa Febraayo 12 gaadiid dadweyne oo cusub ayaa bilaabaya ka shaqeynta wadooyin cusub. 2 Febraayo jimcaha [More ...]
Ahmet Davutoglu Ramadaan si loogu mahadiyo
Kuxigeenka AK Party Konya Ahmet Davutoglu oo ka soo jeeda Samsun, degmada magaalo weynaha ayaa booqday. Ra’isulwasaaraha Samsun oo booqday Dawlada Hoose iyo Magaalada AK Party Konya kuxigeenka Ahmet Davutoglu, Samsun ayaa amaanay. Konya [More ...]
Maanta taariikhda: 11 Febraayo 1888 Dhismaha dhismaha Sirkeci Gar Bugün
Maanta oo ku taal Taariikhda 11 Iyadoo la raacayo doonista 1878 taariikhdeedu ahayd Febraayo, qaadashada shirkada ka shaqeysa wadooyinka tareenka ee Rumeli dhalashada Austrian ayaa la aqbalay. Magaca shirkaddu waxay ahayd Shirkadda Ganacsiga ee Orient Railways. 11 Febraayo 1888 Dhismaha Saldhigga Sirkeci [More ...]